HENINTSAINA DOFA : Mpanao fanatanjahan-tena marary mafy, mila tolo-tanana
Henintsaina Dofa mpanao handball. Nalaza ary efa tao anatin’ny ekipam-pirenena Malagasy. 7 février 2019
Ankoatra ny handball, dia nampalaza azy ihany koa ny fanipazana javelot izay efa nahazoany ny tompon-dakan’i Madagasikara tao anatin’ny taona maro.
Tao amin’ny kilioba Tsarahofana Toamasina no nanombohany nilalao ny taona 1992. Ny taona 1996 tao amin’ny EHB Radama ( Ecole de Handball). Ny taona 1996 voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara ny kilioba nisy azy tao Toamasina. Ny taona 1998, voaantso nandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy izy. Tao amin’ny ekipa nasionaly ny tenany hatramin’ny taona 2002. Ny taona 1998 nandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy niatrika ny lalaon’ny Nosy natao tao La Réunion. Tompondaka lefitra i Madagasikara tamin’izany fotoana izany. Nifanehitra tamin’i La Réunion teo amin’ny lalao famaranana.
Noho ny fahaizany, dia nantsoin’ny Cosmos Secren i Dofa ny taona 1999. Iray taona taorian’io, nantsoin’ny kilioba Cospn Toamasina nilalao tao aminy. Ny taona 2001-2002 nantsoin’ny club St Michel Antananarivo. Ny taona 2003, nafaran’ny kilioba Zanak’Avaratra tany Antsiranana.
Ny taona 1992 hatramin’ny taona 1996 dia izy hatrany no tompondakan’i Madagasikara tamin’ny fanipazana javelot sokajy cadet sy junior.
Porofo ireo rehetra ireo fa nisongadina hatrany i Henintsaina Dofa tamin’ny fanatanjahantena izay nataony. Nanomboka ny volana novambra 2018 anefa dia narary mafy izy. Tsy afaka mandeha. Efa natao ny fitsaboana rehetra. Ankehitriny, lany ny teo am-pelatanana. Amin’izao fotoana izao dia vola 12 000 000 Ar eo ho eo no ilaina ahafahany manohy ny fitsaboana dia ny fividianana protezy atao amin’ny taolana sy anaovana fandidiana ahafahany mahazo fahasalamana indray. Misy noho izany antso tolo-tanana ho an’i Dofa. Ankoatra ny antso avo nataon’ny fikambanana IMT, ny alakamisy 7 febroary lasa teo, dia nisy ihany koa ny fanentanana nataon’ireo nitaiza azy tao anatin’ny handball izay nahitana an-dry : Ranarilalao Olga Vestalys ( Olga Tsarahofana), Ndrianantenaina Olivier talen’ny Crjs , Laurent Rabarivelo talem-paritry ny fanatanjahantena sy ny tanora, Rabemananjara Narisoa filohan’ny Club Tsarahofana amin’izao fotoana izao. Ho an’izay te hanampy an’i Henintsaina Dofa dia ity ny laharana Mvola 034 26 642 87. Tsindrina etoana fa an’i Dofa io laharana io ary azonao ifandraisana aminy. Ho anao kosa izay te hanatona azy mivantana any an-tranony hamangy sy hitondra fanampina, dia ao amin’ny Lot 120 Cité Valpinson 11/62 Toamasina ny adiresiny.
Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Fanantenana ho an’i Dofa isika rehetra. Nitondra avo ny lazan’i Toamasina sy lazan’i Madagasikara iray manontolo izy tamin’ny fanatanjahantena nataony ka mendrika ny ampiana. Izy izay mba mitodika manokana amin’ny fitondrana tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina mba hanampy azy ihany koa.